Fambolena herinaratra hydraulic: fandidiana sy karazana | Fanavaozana maintso
Toeram-pamokarana herinaratra Hydraulika: fandidiana sy karazany
Portillo Alemanina | | angovo hydraulic
Androany isika dia niresaka momba ny angovo vaovao azo havaozina lalina kokoa. Izy io dia momba ny herinaratra. Saingy tsy hiresaka momba izany isika, fa ny toby famokarana herinaratra izay amokarana sy fanatanterahana azy. Zavamaniry mpamokatra herinaratra mahery vaika dia manan-danja tokoa amin'ny famokarana angovo azo havaozina avy amin'ny tahirin-drano. Ho fanampin'izany, manana fampiasana sy tombontsoa marobe ho an'ny mponina izy io.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny tombony rehetra sy ny fatiantoka ateraky ny toby famokarana herinaratra elektrika ary ho hitantsika ny fomba fiasan'izy ireo. Te hahafantatra bebe kokoa momba izany ve ianao? Mamaky hatrany.
1 Inona no atao hoe orinasa mpamokatra herinaratra
2 Tombony azo avy amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra
3 Ny fatiantoka ny zavamaniry hydroelectric
4 Karazan-javamaniry elektrika
4.1 Toeram-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny renirano
4.2 Zavamaniry mandeha amin'ny herinaratra misy tahiry fitahirizana
4.3 Toeram-pamokarana famokarana herinaratra
Inona no atao hoe orinasa mpamokatra herinaratra
Rehefa manangana orinasa mpamokatra herinaratra elektrika isika, ny antenainay dia ny hiteraka angovo avy amin'ny rano voatahiry ao anaty fitahirizana. Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny miteraka angovo mekanika ary ovay ho angovo elektrika.
Vita ny rafitra fanangonana rano mamorona tsy fitoviana nipoiran'ny angovo mety hangonina. Nilatsaka io rano io mba hahazoana angovo amin'ny alàlan'ny fahasamihafan'ny hery misintona. Rehefa mamakivaky ny turbine ny rano dia miteraka hetsika mihodina izay mitondra alternator ary manova ny angovo mekanika ho angovo elektrika.
Tombony azo avy amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra
Araka ny hitanao dia mitondra tombony lehibe ho an'ny mponina izany fa tsy amin'ny haavon'ny angovo ihany. Andao sokajiana ireo tombony ireo mba hamakafaka tsirairay azy ireo:
Angovo azo havaozina izy io. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia tsy ho lany ara-potoana izy io toy ny fosily afaka. Ny rano ao aminy dia tsy voafetra, fa marina fa ny natiora dia mitondra orana hatrany amintsika. Amin'izany no ahafahantsika miverina sy manohy mampiasa azy io ho loharanon-kery.
Amin'ny maha voajanahary sy azo havaozina azy tanteraka, dia tsy mandoto. Angovo madio io.
Araka ny efa nolazainay teo aloha, tsy ny tombotsoantsika ihany no mahasoa antsika, fa ampiarahina amin'ny hetsika hafa toy ny fiarovana amin'ny tondra-drano, fanondrahana, famatsian-drano, famokarana làlana, fizahan-tany na fitsangatsanganana an-tanety.
Na eo aza ny hevitrao, samy kely ny vidin'ny fandidiana sy ny fikojakojana. Raha vantany vao namboarina ny tohodrano sy ny rafitra fitadiavana rano, tsy sarotra velively ny fikojakojana.
Tsy toy ny karazana fitrandrahana angovo hafa, ireo asa natao hanararaotana an'ity karazana angovo ity dia manana fiainana maharitra ilaina.
Ny turbine dia ampiasaina hiteraka angovo. Ny turbine dia tsotra ampiasaina, azo antoka sy mandaitra. Midika izany fa ambany ny vidin'ny famokarana ary azo atomboka sy ajanona haingana izy io.
Zara raha mila fanaraha-maso avy amin'ny mpiasa, satria toerana tsotra ny fanatanterahana azy.
Ny zava-misy fotsiny hoe angovo azo havaozina sy madio miaraka amin'ny vidiny mirary izy io dia efa lasa angovo fifaninanana eo amin'ny tsena. Marina fa misy fatiantoka vitsivitsy araka izay ho hitantsika etsy ambany, na dia mifandraika kokoa aza ny tombony azo.
Ny fatiantoka ny zavamaniry hydroelectric
Tsy mahagaga raha tsy ny tombony rehetra io karazan-kery io. Izy io dia misy fatiantoka vitsivitsy rehefa hiteraka ary tokony ho raisina ihany koa izy ireo raha toa ka hapetraka hanomezana mponina na, farafaharatsiny mba hanomezana anjara biriky amin'ny fangatahana angovo.
Hodinihintsika ny maharatsy an'ity karazana angovo ity:
Araka ny efa nampoizina, orinasa mpamokatra herinaratra elektrika mitaky velaran-tany midadasika. Ny tranonkala apetraka dia tsy maintsy manana toetra voajanahary mamela ny angovo azo hararaotina tsara.
Matetika dia lafo ny vidin'ny fananganana toby famokarana herinaratraKoa satria tsy maintsy omaninao ny tany, manamboara ny rafitra fampitana herinaratra ary very ny angovo amin'ity dingana ity izay tsy azo averina intsony.
Raha ampitahaina amin'ny zavamaniry hafa na karazana angovo azo havaozina hafa dia maharitra ela ny fananganana ilay zavamaniry.
Miankina amin'ny lamina orana sy ny filan'ny mponina, ny famokarana angovo dia tsy maharitra.
Ity farany dia miseho amin'ny karazana angovo azo havaozina maro. Iray amin'ireo olana tsy maintsy raketina ny ankamaroan'ny sehatry ny fanavaozana. Toy ny herin'ny rivotra dia mitaky rivotra ary ny masoandro Aorian'ny tara-pahazavana mandritra ny ora maro dia mila orana be ny hydraulika hiteraka riandrano tsara.
Mba hampihenana ny tsy fahampiana io dia tsy maintsy fantarinao tsara ny fomba hisafidianana tsara ilay toerana. Ohatra, tsy mitovy ny mametraka ny zavamaniry amin'ny faritra tena tsy dia be ny rotsakorana ary maina ny toetrandro amin'ny ankapobeny raha oharina amin'ny fametrahana azy amin'ny faritra be orana. Amin'ny fanaovana izany, ny famokarana angovo dia ho mora vidy sy be dia be kokoa.
Misy karazana zavamaniry hydroelectric isan-karazany arakaraka ny fomba fiasan'izy ireo.
Toeram-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny renirano
Izy io dia karazan-javamaniry izay tsy manangona rano be ao amin'ny turbines, fa kosa araraoty ny fikorianan'ny ony misy misy amin'io fotoana io. Rehefa mandeha ny fizaran-taona, miova ihany koa ny riaka, ka tsy afaka ho very maina ny rano be loatra amin'ny fihoaran'ny tohodrano.
Zavamaniry mandeha amin'ny herinaratra misy tahiry fitahirizana
Tsy toy ny teo aloha, ity iray ity dia manana fitahirizana toerana itehirizana ny rano tahiry. Ny reservoir dia mamela ny habetsaky ny rano tonga amin'ny turbine ho fehezina amin'ny fomba mahomby kokoa. Ny tombony atolotray momba ilay teo aloha dia ny fananana rano anaty rano ho tahiry, afaka mamokatra angovo herinaratra mandritra ny taona izy io.
Toeram-pamokarana famokarana herinaratra
Amin'ity tranga ity dia manana reservoirs roa miorina amin'ny ambaratonga samihafa isika. Miankina amin'ny filan'ny angovo elektrika dia mampitombo ny famokarany izy ireo na tsia. Toy ny fifanakalozana mahazatra no ataon'izy ireo. Rehefa latsaka ny rano izay tehirizina ao amin'ny fitehirizan-drano ambony, ahodino ny turbine ary, raha ilaina, ny rano dia potsehina avy ao amin'ny fitehirizam-bokatra ambany mba hahafahany mamerina indray ny tsingerin'ny fivezivezena.
Ity karazana afovoany ity dia manana ny tombony azo fehezina arakaraka ny fangatahana herinaratra.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny zavamaniry hydroelectric ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » angovo hydraulic » Toeram-pamokarana herinaratra Hydraulika: fandidiana sy karazany
Fiovan'ny toetrandro any Espana